प्रशिक्षण दिदादिदै धावक रोकाया विरामी
जुम्ला ः एथलेटिक्स धावक हरिबहादुर रोकाया विरामी परेका छन् । गत शनिवार एक्कासी हातखुट्टा चल्न छाडेपछि उनी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा उपचारका लागि पुगेका थिए । चिकित्सकले पोसिलो खानेकुरा खान सुझाव दिएपछि घरफर्केका धावक रोकाया प्रशिक्षार्थीलाई प्रशिक्षण दिन सिमाचौर मैदानमा जान खोज्दा एक्कासी शरीर चल्न छोडेपछि उपचारका लागि काठमाण्डौ लगिएको छ ।
हाल न्युरो अस्पताल वासवारीमा आईसियुमा राखेर उपचार भईरहेको धावक रोकायाका आफन्तजनले जनाएका छन् । शरीर नचल्दा हिडडुल गर्न सकिने अवस्था रहेन, कर्णाली स्पोर्टक्लव जुम्लाका अध्यक्ष सरोज शाहीले त्यतिनै वेला जहाजमा उपचारको लागि काठमाण्डौ पठाईसकिएको बताए । अहिले स्वास्थ्यमा सुधार आईरहेको छ । धावक रोकाया खुट्टा चलाउन सक्ने भएका छन, डा. नविन थापाले भने, यो रोग निको हुन न्युनतम चार पाँच महिना लाग्छ । उनका अनुसार धावक रोकाया एकासी हात लुलो भएर भनेर अस्पतालमा चेक गराउन निस्केका थिए ।
शरीरको स्नायु प्रर्णालीमा कमजोर भएर समस्या उनको भनाई छ । खानपानको सन्तुलन नमिल्दा रोगसंग लड्न क्षमता कमजोर भएपछि स्नायु प्रर्णालीमा समस्या आएको डा. थापा बताए । निमोनिया, डायरीया भएको खण्डमा नसा हानेर समस्या हुन्छ । त्यो समस्या उनमा देखिएको हो । नसामा किटाण्ुाले संक्रमण गरेकोले फिजियोथेरापी भईरहेको छ । रोगसंग क्षमता बढाउने औषधीको प्रयोग भईरहेको उनले बताए ।
धावक रोकाया जुम्लाको सिमाचौरमा दुई दर्जन वढि खेलाडीलाई एथलेटिक्स प्रशिक्षण दिदै आएका थिए । खेल क्षेत्र मार्फत संसारमा जिल्लाको नाम उचो पार्न तम्सीएका धावक रोकायाले जन्माएका आधा दर्जन बढि धावकले राष्ट्यि तथा अन्तराष्ट्यि स्तरका खेलमा भाग लिईसकेका छन् । उनले खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिनका लागि हिमपात, घामपानी नभनेरै निरन्तर लागिरहेका छन् । उनी विरामी भएर काठमाण्डौमा उपचारका क्रममा हुदा उनका प्रशिक्षार्थी अहिले प्रशिक्षक विहिन भएपछि नराम्रो अनुभुति गरिरहेका छन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले उनलाई पक्षघात भने नभएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति : ८ असार २०७५, शुक्रबार